GIDRO | mandimby maharo
Posted on 8 July 2012 8 July 2012 by Mandimby Maharo
Taorian’ny nampalaza ny fanondranana antsokosoko ny hazo sarobidy dia nanaraka indray ny fanondranana sokatra. Sarona nefa io ka dia ny saobakaka sy ny tanalahy indray no natao anaty vata ka naondrana ambongadiny. Rehefa tsy nahita irika indray tamin’io dia nalefa indray ny omby. Niteraka asan’dahalo (hono) io ka lasa nananosarotra ny fanaovana azy. Efa hita teto koa ny nanondrana olona ho atao mpanompo any amin’ilay tany tondra-dronono sy tantely. Nahita hevitra indray taty aoriana ka dia ny gidro no nangatahana alalana ny hanondranana azy. Ho entina any amin’ny tany lavitra ny toerana fonenany voajanahary ireto gidro gasy ireto mba hampialana voly ireo mpanankarena any ivelany any.
Atao ahoana tokoa moa no andeha anakanana azy ireo satria atody miady amim-bato ihany ireto Malagasy kely mihoatra amin’ny fanamparam-bola ataon’ireo mpividy. Aleo dia omena azy ara-dalana fa azony entina ireo biby ireo. Ny firenena rahateo tsy manana fampidiram-bola taorian’ny fanapahan’ireo mpanam-bola ireo ny fanampiany. Isika rahateo mbola samy variana mifamaly ka tsy manam-piniavana sy fitiavana ny hanangana orinasa mba hamelomana ny tanindrazana.Voatery mitady lalana hafa noho izany ka ny mivarotra fanana no hany azotsika atao.
Atao inona tokoa moa gidro raha toa ka ny olona ary tsy mihinan-kanina sy tsy mitafy. Aleo mba amidy any aloha izay biby kely ireny fa aina ity hoy ilay rainimanonja, sitrany ahay vaza-mihetsika. Ny vola rahateo toa rano ny fandaniana azy tato ato nandritra ireny famonoana ny afom-pitakiana sendikaly maro samy hafa ireny. Eo koa ny filana vola be amin’ny famelomana ireto akamakama mpiara mitsetsitra mameno lapa-panjakana. Tsy maninona fa gidro gasy ihany ireny na dia any ivelany any azy no mipetraka. Sady tsy dia ilay tany niaviany rahateo ny mahasarika fa ilay vokatra avy ao aminy. Koa inona moa no antony andanian’ireo tia sy mpankafy izany vokatra voajanahary izany andro andeha aty amin’ny tany lavitra aty. Sady toa malaza hoe tsy milamina aty. Tsy ilaina ny mizaha tany aty satria eo amin’ny Tanana misy azy misy vala azony tsidihina ka ahitany ireo izay tiany ho jerena.
Nefa rehefa atao tokoa ny fandinihana, maninona moa no tsy teto no natsangana ilay vala tiana hisarihana ireo mpizaha ireo; raha samy andany vola ihany ireo mpanankarena ireo, tsy azo natao ve ny nifampiraharaha ny mba tsy hitondrany izany biby izany any aminy fa mba ny mpitsidika indray ny manantona. Saingy indrisy fa tsy ireo nentina naondrana ihany no gidro fa na ireo izay namela sy nitaona azy ireny handeha koa toa manao gidrogidro fisainana.